Izingubo zokusebenzela kanye noyunifomu
UMon - uFri noSati ekuseni kuphela
"Giacoppo" Forensic Workwear namaunifomu
Umsila Wokugqama Kwabesilisa Nabesifazane
I-Giacoppo enomsila amaphakethe I-Forensic Togas, Unifomu kanye Nezingubo Zomsebenzi ekomkhulu layo ku Messina, ehlukaniswa isitayela nokunemba. Ngenxa yeminyaka yakhe eminingi yesipiliyoni, inkosi Umsunguli we-Giacoppo futhi ibona imisebenzi eyenziwe ngokuhambisana nayo Indoda nowesifazane lomsebenzi omuhle.
Izingubo Zokusebenza kanye ne-Forensic Togas "Giacoppo" eMessina - Iziketi ezihlanganisiwe kanye namaunifomu
Izingubo zomsebenzi kanye ne-Togas yangaphambili ngezinye zezinto ezidaliwe ezinembile ezenziwe I-Giacoppo enomsila che wenza a Messina ukuqondisisa kuyasebenza enzelwe Indoda nowesifazane. ke Umsunguli we-Giacoppo uthole ukuqashelwa nokwazisa kuwo wonke amakhasimende abathembekile abaphendukele kuye eminyakeni edlule. Ngenxa yokunakekelwa nokuzinikezela ekwakhiweni kwezingubo ezifakiwe Indoda nowesifazane, lo I-Giacoppo enomsila Ngokuhamba kwesikhathi sekuyisiqinisekiso sesitayela nobuciko bezingubo ezenziwe kahle. Ubuciko bukaGiacoppo, etholwe ngaphezu kweminyaka yokusebenza, kubonakala kuyo yonke ingubo eyenziwe ngezindwangu zekhwalithi.
Ama-Forensic Togas kanye ne- "Giacoppo" AmaYunifomu Wokusebenza - AmaToga Abameli Nezimantshi kulo lonke elase-Italy
Ngaphezu kwe Umfaniswano womsebenzi, lo ukuvumelanisa "IGiacoppo", a Messina, ikhethekile ikakhulukazi ekwakhiweni kwe ITogas eyenziwe ngomsila ngayinye Abameli kanye neMantshi. the i-togas zinakekelwa ngemininingwane yonke, zihlala zigcwalisa izidingo zeklayenti futhi zenziwa ngokuphelele ngezandla nangezindwangu ezisezingeni eliphakeme. Uthisha IGiacoppo ujabulela idumela elinjalo lokuthi Ngokwezifiso I-Forensic Togas ahlanganiswe nguye afunwa futhi di I-Messina. Ukuhluka kwengubo, eyenzelwe wena ngokwezicelo zakho, kuthuthukiswa ukufakwa konke okuphethwe ngesandla nekhono le-master sartorial IGiacoppo.
I-Giacoppo enomsila eMessina - Exclusivity and Craftsmanship
Ngaphezu kwezinhlobo eziningi ze izingubo zomsebenzi, lo I-Giacoppo enomsila izingubo ezenziwe ngomsila zazo zonke izinhlobo, ngezindwangu ezikhethekile futhi - esiceliwe - ngezingubo zokuhlobisa ezenziwe ngezifiso. A Ukweluka amadoda nabesifazane ilungele labo abangafuni ukuyeka okwangempela futhi abafuna ukuthuthukisa ubuhle, kokubili okwezingubo zansuku zonke kanye nemikhosi. Noma yini oyifunayo, i I-Giacoppo enomsila a Messina uyakwazi ukukufeza: vele uchaze umbono wakho noma uthole izeluleko kumphathi umsila.
Ukulungisa kahle umfaniswano nezingubo zomsebenzi
IGiacoppo Akungabazeki ukuthi uphakathi kwe imisila idume kakhulu kuneDolobha Lokubambabazeka, ngenxa yesipiliyoni nobuhlakani bomsunguli wayo, umphathi ongcono IGiacobbe. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40 Umsila i-mesinese ibona izifiso zezakhamizi ezikanye nayo namakhasimende athembekile kulo lonke elase-Italiya ngezingubo ezenziwe ngobuhlakani. Uma phakathi kwamandla, i- ukuvumelanisa ingaziqhayisa ngokugcwaliseka kwe I-Forensic Toghe ezenziwe ngezandla ngokuphelele Abameli Nezimantshi, futhi ivelele zonke ezinye izinhlobo ze Amayunifomu e Izingubo zomsebenzi. Okokugcina, ubuhle, ubuciko bendabuko kanye nesitayela kungenye yezimpawu ezihlukile ukuthi i-Giacoppo ihlale inikela kuwo wonke amakhasimende ayo.
Ikheli: I-Via Nino Bixio, 132
Ucingo: 090 716008
Umakhala ekhukhwini: 335 6586140
Inombolo ye-VAT: 01352700833